Belarosia: nanapaka hevitra ireo manampahefana fa hofoanana ny toeram-pialofan’ireo niharan’ny herisetra an-tokantrano · Global Voices teny Malagasy
Tolotra iray tena nilain'ireo vehvavy ao Belarosia ny Radislava
Voadika ny 23 Septambra 2021 2:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Español, Português, English
Vehivavy mitafa eo ambony dabilion'ny kianja iray ao Brest, Belarosia. Sary an'i Adam Jones tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
Ny 15 Septmabra 2021 ity lahatsoratra nosoratan'i Nicole Ely ity no nivoaka tao amin'ny Transitions Online. Naverina navoaka indray araka ny fifanarahana mifampizara votoaty sy nokiraina hifanaraka amin'ny endrika GV.
Iomanan'ireo manampahefana ao Belarosia ny hanafoana ny Radislava, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) ao Minsk, miasa manokana manampy ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano.
Ny Radislava dia ONG belarosiàna niorina tamin'ny 2002, natsangan'ireo vehivavy niharan'ny herisetra. Tamin'ny 2004, napetrak'izy ireo tao Minsk ny toeram-pialofana voalohany tao amin'ny trano iray misy efitra roa fatoriana, ary nanomboka teo dia nanampy vehivavy an-jatony maro ry zareo. Ankehitriny, akaton'ireo manampahefana ilay fikambanana.
Ilay fanafoanana dia ampahany amin'ny famoretana amin'izao fotoana izao atao an'ireo ONG, media tsy miankina, ary mpikatroka izay nihamafy tamin'ity lohataona ity. Arovan'ny filoha Alyaksandr Lukashenka ilay fandiovana, tamin'ny nilazàny fa marobe amin'ireny fikambanana ireny no mpitsikilon'ny vahiny na “jiolahy gangsters” ary “nanohintohina ny fanjakana” io hetsika io.
Ankoatry ny fanomezana fialofana ho an'ireo nianjadian'ny fanararaotana ara-batana, ara-pihetsehampo, ara-toekarena, ary ara-nofo, ny Radislava dia manome ihany koa fanohanana ara-tsaina sy torolàlana momba ny lalàna. Ny 2016 hatramin'ny 2019, nampiantrano vehivavy niisa 451 avy amin'ny saranga sôsialy rehetra ilay fikambanana, ary nanome tolotra ho ana vehivavy mihoatra ny 700 isantaona. Mijanona hatramin'ny taona roa ao amin ‘ilay toerana fialofana ny sasany amin'ireo vehivavy.
Tolotra iray tena nilain'ireo vehivavy ao Belarosia ny Radislava, izay ny antsasak'ireo vehivavy tonga ao dia niharan'ny herisetra an-tokantrano, araka ny fanadihadiana iray tamin'ny 2018 nataon'ny Ivontoeran'ny Sôsiôlôjia ao amin'ny Akademiam-Pirenena momba ny Siansa. Tamin'ny 2019, izy no iray tamin'ireo fikambanana roa hany nitantana toerana fialofana ho an'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano tao Minsk.
Safidy iray hafa ho an'ny pôlisy ny fisian'ny Radislava, izay marobe no mandà tsy hihetsika rehefa misy tranga tahaka izany, ary ho an'ireo tribonaly, izay matetika manoro hevitra ny mpivady mba hanandrana hifamela. Na dia ilainy aza, tsy misy mihitsy ao Belarosia ny lalàna miady amin'ny herisetra an-tokantrano. Tamin'ny 2018, rehefa naroso ny volavolan-dalàna iray hanamelohana ny fihetsika tahaka izany, nofoanan'i Lukashenka ilay izy, nantsoiny hoe “zavatra tsy misy dikany avy any Andrefana voalohany indrindra.”
Ny Septambra 2021, nandany ihany volavolan-dalàna iray miady amin'ny herisetra an-tokantrano ny antenimiera belarosiàna, nandritra ny famakiana azy voalohany, volavola mikendry ny hisorohana fa tsy ny hanasaziana, hoy ny tatitry ny fampielezampeom-panjakana Belteleradio. Mialohan'ny famakiana fanindroany, tamin'ny 7 Septambra teo dia nikarakarana resaka an-databatra boribory ireo mpanao lalàna, niaraka tamin'ireo tomponandraikitry ny fampiharana ny lalàna sy ireo manampahaizana manokana momba ny fiahiana ara-pahasalamàna, ny fanabeazana ary ny fiarovana sôsialy.
Na tsy voatery hanome antony amin'ny fanafoanana ny Radislava aza ny tribonaly izay namoaka ilay didy, tsy hitondra fiovàna manakory loatra ny fanapahankevitra ofisialy, hoy i Hanna Liubakova, Belarosiàna mpanao gazety izay efa nanoratra momba ny Radislava tany aloha.
“Tsy dia tena misy lanjany loatra izay fanapahankevitra ôfisialy satria tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny tena zavamisy,” hoy izy. “Mba tsy hisian'ny hetsika sy ny fanoherana eto Belarosia, potehan'ny fitondrana daholo izay fikambanana sy fiarahamonina sivily.”